गुलाबी बीच: कहाँ? विवरण
सेतो समुद्री तट, संसारको सबै भन्दा विदेशी कुनामा स्थित, लामो कुनै आश्चर्य छ। तर, संसारमा त्यहाँ प्रशंसा मा स्थिर बनाउन रंगीन ठाउँहरू छन्, र बहम्अन द्वीपसमूह बस एक यस्तो अपवाद छ। यो सुरम्य बन्दरगाह, द्वीप राष्ट्र को एक कुलीन छुट्टी गन्तव्य मानिन्छ जो संसारभरि देखि एक चुम्बक जस्तै धनी पर्यटकहरु आकर्षित गर्छ। तिनीहरूले व्यक्तिगत fantastically सुन्दर गुलाबी समुद्र तट, बालुवा को आफ्नो असामान्य रंग लागि प्रसिद्ध हेर्न यहाँ हतार।
सिद्ध समुद्र तट
अद्वितीय प्रकृति सधैं मूल द्वीपसमूह को मुख्य आकर्षण भएको छ। धेरै वर्ष को लागि, बहामासको तिनीहरूलाई स्मरणीय खुसी क्षणमा दिंदै यात्री स्वीकार्नुहुन्छ। तर सबैभन्दा अटलांटिक महासागर मा धेरै राज्य द्वीप बीचमा विशेष प्रसिद्ध हार्बर, यसको तटों लागि जानिन्छ जो छ। सुसज्जित र पौडी लागि राम्रो उपयुक्त, तिनीहरू सबै पक्षहरूमा मा आदर्श हो।
गुलाबी बीच (गुलाबी बालुवा बीच) विशेष गरी आगंतुकों द्वारा प्रेम, सुरुमा एक अप्टिकल भ्रम गर्न श्रेय गर्न सकिन्छ जो अद्भुत घटना, पराउँछु गर्न। यस अनन्त नीलो आकाश, स्पष्ट पानी र बालुवा outlandish रंग: द्वीप आगन्तुकहरूलाई आँखा अघि inexpressible शब्दहरू रमणीय तस्वीर खुल्छ। को कुमारी प्रकृति यस्तो शोभा आनन्द पनि अनुभवी धेरै यात्री संग हार्बर स्थिर बनाउन।
बालुवा को अस्वाभाविक छाया को कारण के हो?
पारदर्शी फिरोजा पानी पनि यसको रंग परिवर्तन र प्रकाश लुप्त होती सूर्यका यो सुरुतिर को गुलाबी रंग बन्नेछ। यो घटना समुद्र तट मा जीवित unicellular कीराहरू संग सम्बन्धित छ, जुन को खोल एक delightfully कोमल टोन मा चित्रित छ। को सर्फ ठूलो संख्या मा किनारामा तिनीहरूलाई फेंक गर्दा, सूक्ष्म गोले भङ्ग र यो एक अद्वितीय रंग दिने, बालुवा संग मिश्रित गर्दै छन्।
सागर त राम्ररी छ गुलाबी बीच (हार्बर) मा निकालेको बालुवा को द्वीपसमूह को पाहुनाहरूलाई कुनै पनि खतरा छैन भनेर कडा खोल grinds: यो लोचदार नरम छ, र यो झूठ धेरै सुखद छ। यो पानी grinds र सानो अनाज, जो पनि peculiar छाया बराबरीको कीराहरूको foraminifera दिन्छ रातो Corals बताए हुनुपर्छ।
अचम्मको कुरा, स्थानीय आकर्षण को रंग रूपमा प्रकाश आधारमा फरक हुन्छ। संसारको गुलाबी बालुवा मा एक सुन्दर समुद्र तट मा न्यानो घाम को उज्यालो रेज अन्तर्गत बकाइन र धातु विचार झूठ र सूर्यास्त मा त्यो बैजनी प्यालेट हिट।
समुद्र तट Eleuthera
सानो हार्बर, पाँच द्वीप Eleuthera नजिकै स्थित, लम्बाइमा किलोमिटर फैलयो र साँघुरो घाट therebetween छ। नयाँ साहसिक र अनुभव खोजीमा गर्नेहरूलाई, नौका को सुरम्य शहर, unspoiled प्रकृति र कम-ज्ञात गुलाबी तटों लागि प्रसिद्ध गर्न ओसारपसार हुनेछ। सात भन्दा बढी हजार मान्छे सागर क्षेत्र हराएको व्यावहारिक वीरान छ, र मात्र masterpieces प्रकृति द्वारा सिर्जना को जनसंख्या संग, नयाँ अतिथि लिन। पश्चिम र पूर्व मा स्थित, तिनीहरूले केही पर्यटकहरु गरेर हैरानी थिए।
एक विकास पूर्वाधार द्वीप
यो छैन बन्दरगाहसम्म लामो उडान गर्न मात्र कारण, त्यसैले थोडा छ र यो पर्यटकहरु को ध्यान आकर्षित गर्न सक्छन् अरू के बारेमा बताउन - यो द्वीप को गुलाबी समुद्र तट कि उल्लेख गर्नुपर्छ।
यो सबै जीवन हार्बर द्वीप पर्यटकहरु सेवा छ भनेर भन्न कुनै अत्युक्ति छ। सहज होटल संग विकसित पूर्वाधार, रेस्टुरेन्ट र बुटिक को एक पुरा श्रृंखला हरेक वर्ष यात्री हजारौं आकर्षित गर्छ। घाम रिसोर्टमा सबैलाई मा समुद्र तट मा एक आराम छुट्टी देखि, आफ्नो स्वाद गर्न मनोरञ्जन फेला पार्न र सक्रिय खेल संग समाप्त हुनेछ।
द्वीप Dunmore टाउन, को आदिवासी मान्छे जहाज निर्माण मा लगे र उखु कारोबार गर्दै छ। यो बहामासको सबैभन्दा पुरानो शहर हो, र यसको भवन एक विशेष शैली छ। पर्यटकहरु म मनोरञ्जन व्यापार मा रात जीवन मनपर्ने व्यवस्थित सोख धेरै फिट जवान मान्छे छैन भनेर भन्न। तर आफूलाई प्राकृतिक सौन्दर्य को चिन्तन बिना कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ नगर्ने ती, एकै नजरमा जादु हार्बर प्रेम पर्नु।
सर्वश्रेष्ठ क्यारिबियन द्वीप, यसलाई थियो पाठकहरूलाई यात्रा यात्रा + आराम, पर्यटक उच्चतम स्कोर, प्रेम मा बहम्अन मोती चिनन पाए।
बालुवा द्वीप हार्बर को अचम्मको रंग छैन केवल धनी पर्यटकहरु आकर्षित गर्छ। त्यहाँ धेरै चमकदार पत्रिकाहरू शूटिंग छन्, र tanned मोडेल Swimwear गुलाबी बालुवा देखाउन। परिणामस्वरूप तस्वीर पनि कुनै पनि retouching आवश्यक छैन।
समुद्र तट टाढा छैन, स्थित पाँच-तारे होटल अतिथि भेटी उच्चतम स्तर मा आराम।
कारण चार-किलोमिटर गुलाबी समुद्र तट कोरल reefs सुरक्षित भन्ने तथ्यलाई गर्न, यो यसको अतिथि खुसी भन्दा, पानी को शुद्धता राख्छ। सबै दुनिया भर देखि एक अविस्मरणीय अनुभव लागि आउन जो गोताखोरों, संग विशेष खुसी। यहाँ तपाईं अटलांटिक महासागर को सर्फ महसुस छैन किनभने तिनीहरूले, एक सहज गोता ध्यान दिनुहोस् र बलियो छालहरू को कमी गहिरो समुद्र को दुर्लभ बासिन्दाहरू नियालेर अनुमति दिन्छ। यो जहाँ दृश्यात्मक लगभग 60 मीटर छ स्पष्ट पानी, संग केहि द्वीप को छ भनेर विश्वास गरिएको छ।
स्थानीय अधिकारीहरूले उहाँलाई यति नजिक कुनै पनि निर्माण निषेधित प्राकृतिक आश्चर्य संरक्षण बारे चिन्तित हुनुहुन्छ।
गुलाबी बीच हार्बर द्वीप हलिउड सेलिब्रेटीहरू रोजेका थियो, र यो पर्यटकहरु एक विदेशी स्थानमा घर खरीद आरामपूर्वक strolling मिडिया व्यक्ति, पूरा सम्भव छ।
उच्च सिजन यात्रा पर्यावरण-मैत्री रिसोर्टमा मई मा सुरु र समाप्त सेप्टेम्बर।
मामला गुलाब-रंग चश्मा जहाँ आवश्यक छैन
निस्सन्देह, यस्तो प्राकृतिक घटना यस्तो ग्रीस रूपमा अन्य देशहरूमा, मा अवस्थित, तर सबै भन्दा प्रसिद्ध सबै दुनिया भर फैलाउन फोटो जो बहामासको, मा गुलाबी समुद्र तट थियो। रोमान्टिक Getaway र सुहागरात लागि सबै भन्दा राम्रो ठाँउ बस फेला पार्न! हार्बर द्वीप आउन, र तपाईं साँच्चै खुसी जस्तै महसुस गर्न, गुलाब-रंग चश्मा आवश्यक छैन।
पर्यटन अफ्रीका: अफ्रीका को अचम्मको महादेशमा
Norilsk: जनसंख्या, जलवायु, आकर्षण
Tikhonov मरुभूमिमा, कालुगा क्षेत्र। सेन्ट Tikhonov मरुभूमि
मेनहट्टन झोलुङ्गे पुल - को न्यूयोर्क को प्रतीक को एक
डोमिनिकन गणतन्त्र सेप्टेम्बर मा के राम्रो छ? का बारेमा पत्ता लगाउन प्रयास गरौं!
आइतबार देखि सोमबारदेखि के सोच्ने हो?
Cooktop - विचार विकल्पहरू
लेर्मोन्टोभ। सिक्न सजिलो कविताहरू - के गोप्य छ?
Ekonomitel इन्धन FreeFuel: छोडपत्र वा छैन? ग्राहक समीक्षा
जो पदार्थ कुनै स्वाद छ? जीव, ग्रेड 8
"Espumizan" लागूपदार्थको। प्रयोगको लागि निर्देशन
च्याउ सलाद कसरी खाना पकाउनु